TOP 100 Short Quotes Maka 2020 - Pedia na-ekwu okwu
107 ruturu na okwu
Anyị na-adịghị emezughị Ghọta ezigbo ịma mma na ike nke okwu. Okwu mkpịsị ugodi ziri ezi nwere ike ịrụ ọrụ dị ebube ma nwee ike ịgbanwe usoro mmadụ.
Okwu nwere ike gbaa mmadụ ume ma nyere ya aka ịtụgharị uche. Anyị kwesịrị ile onwe anyị anya dị ka onye nwere ọ luckyụ ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ndị mmadụ na ndụ nwere ike ime ihe dị ka mmetụta nwere ike ime ka ndụ anyị baa ụba site na nnukwu okwu.
Ndị a nwere ike ịbụ ihe ọmụmụ ga-enyere anyị aka ịme mkpebi mgbe anyị nwere nsogbu ma ọ bụ nye anyị ike ọgụgụ isi anyị chọrọ iji chee ọnọdụ ndị siri ike ihu.
Nkọwa dị mkpụmkpụ ndị si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ na-eme ka anyị nwee ọgụgụ isi na ndụ ha na ahụmịhe ha. Ha ejisie ike ịkọwapụta echiche ha n'ụzọ ọ ga - adịgide ruo ụbọchị ma na - amasị ndị na - agụ akwụkwọ n'ọnọdụ dị iche iche.
Gbalịsie ike ka ị zụlite omume nke ime ihe bara uru nkenke okwu kwa ụbọchị. Ha dị ike ruo n'ókè iji merie ọrụ egwu ọ bụrụgodị na ọ nweghị mmasị gị ozugbo, ị ga-echetara gị okwu ndị a mgbe ịchọrọ ha.
Ọ bụrụ na ị na-amụ ma na-emekwu onwe gị kwa ụbọchị kwa ụbọchị, mara na ị ga-abụ ezigbo ahụ ike karịa onwe gị ma emesịa. Ọ bụla dị obere ma n'eziokwu na-akwụ ụgwọ na-agụta ogologo oge.
Ghapuo onwe gi dika can kari ike karie nihi na nke ahu bu n’eme ka echiche gi nile ju ndu gi. Gbalịsie ike na bụrụ ụdị kachasị mma nke onwe gị ma gbaa ume ndị ị nwere ike ime ike gị niile.
Nkwenye onwe onye nke putara bu itukwasi obi. Ọ dị mkpa inwe okwukwe na onwe gị na ọrụ gị…
Ihe niile na-egbuke egbuke abụghị ọla edo. - William Shakespeare
“Ihe niile na-egbukepụ egbukepụ abụghị ọla edo” - nke a abụrụla okwu mgbe ochie. Ọ dị mkpa ịghọta…
Bilie, teta ma ghara imecha ihe mgbaru ọsọ ahụ. - Swami Vivekananda
Gbalịsie ike na ịgbachi nkịtị, ka ihe ịga nke ọma mee mkpọtụ. - Frank Ocean
Kedu ihe na-akpali gị ịrụsi ọrụ ike? Ọ bụghị ihe ọ bụla ọzọ karịa agụụ nke dị n'ime gị; niile…
Na nkeji ọbụla ị na-ewe iwe ị ga-atụfu inwe obi ụtọ iri isii. - Ralph Waldo Emerson
Ebumnuche bụ isi okwu a bụ ịgwa anyị maka inwe obi ụtọ oge niile. Ọ bụ…
Sọpụrụ onwe gị na ndị ọzọ ga-akwanyere gị ùgwù. - Confucius
Ọ bụrụ na ị naghị akwanyere onwe gị ùgwù, olee otu ị ga-esi tụọ anya ka ndị ọzọ kwanyere gị ùgwù? Kwanyere onwe gi ugwu putara…
Emechara nke ọma ka mma. - Benjamin Franklin
Anaghị m akwụsị mgbe ike gwụrụ m. M na-akwụsị mgbe m mechara. - Marilyn Monroe
Mgbe anyị na-agbalị imezu ihe, anyị na-enyefe ndụ anyị iji rụpụta ebumnuche ahụ. Maka nke ahụ, anyị…